IINKONZO | Izabelo Jiangsu Kaichuang International Trade Co., Ltd.
Yonke into esiyenzayo, kuphela ukuvumela abathengi ukuba bafumane izibonelelo ngakumbi kwintengiso ukuze bafumane amathuba oshishino ngakumbi okwenza ixabiso ngakumbi kubathengi bethu nakuluntu.
"Ukujolisa kubathengi", sinika uluhlu olupheleleyo lweenkonzo ezisemgangathweni kubathengi bethu.
Uvavanyo lweSampula yasimahla
Nika iisampulu zovavanyo
Phendula kuThethwano lobuGcisa
Ukwamkela iZicelo zeNkonzo
Ukubambelela "kulwaneliseko lwabathengi njengoko kugxilwe, ukuphuculwa komgangatho oqhubekayo, ukufuna umgangatho wokugqwesa" umgaqo-nkqubo womgangatho. Ukomeleza imveliso kunye neendlela zokubeka iliso. Gxila ekuphuculeni ukhuphiswano oluphambili lwamashishini. Ngokulawula ngokungqongqo umgca wemveliso, inkqubo nganye yokuzihlola, ukujongana kunye nokuhlolwa okugqityiweyo, iimveliso ezigqityiweyo zokuhlola ukuqinisekisa ukuba imveliso nganye inokuthenjwa kwaye ilunge kakhulu kumgangatho. inkokeli kushishino lokulungisa ialuminium.
Uvavanyo olungqongqo, ukuSebenza okuKhuselekileyo
I-Mingtai ihlangabezana neemfuno zomsebenzisi ngenkqubo yolawulo egqwesileyo, ukusuka ekuthengweni kwe-aluminium ingot, ukuvelisa,
Inkqubo yokuqinisekisa ukulandelwa kwenkqubo, enika ukhuseleko kubasebenzisi.
Ukusuka kwi-Order ukuya kwi-Delivery
Ngekhontrakthi yokuthengisa, unobhala wokulandelela iodolo ujonga iimodeli kunye nobungakanani bealuminium alloy.
Uvavanyo loMgangatho ngaphambi koZiso
Emva kokugqitywa kwemveliso yemveliso, umhloli osemgangathweni uya kujonga ngokungqongqo umgangatho webhetshi nganye yeemveliso, athathe iifoto kwaye azithumele kubathengi.
Jonga izinto xa upakisha
Phambi kokupakisha kunye nokuthunyelwa, unobhala wokulandelela iodolo ujonga izinto ezipakishwe kwakhona kunye noluhlu lokupakisha ukunqanda ukulahleka kwezinto.
Sebenzisa ukupakisha ngomthi ukutywina i-aluminium alloy, ukuthintela i-oxidation ye-aluminium alloy, kunye nokuqinisekisa ukuhanjiswa kweemveliso ngendlela ekhawulezileyo, ekhuselekileyo kunye ethembekileyo.
Ukusuka kwisikimu sisenza uvavanyo lwendawo yabathengi, sibonelela abathengi ngenkqubo egqibeleleyo yenkonzo eyenza ubume obubanzi, obunemilinganiselo emithathu, esenza ukuba abathengi babe namava atyebileyo kwaye agqibelele.
Inkonzo ngaphambi kokuthengisa
Ukubonisana ngemveliso: Ukwamkela ukubonisana ngenkonzo ngeentsuku ezingama-365 ngonyaka.
Iqela lezobuchwephesha elinamandla: Izisombululo zeteknoloji ezifanelekileyo zenzelwe wena.
Iindlela ezahlukeneyo zokusifumana: I-imeyile, iTel, i-Skype, iFacebook, iTwitter, iLinkedin, iNgcoko ekwi-Intanethi ...
Inkonzo ngexesha lokuthengisa
* Ukuveliswa kwezityalo ezikrelekrele kakhulu.
* Rhoqo ingxelo yenkqubela phambili yemveliso.
* Uvavanyo olungqongqo phambi kokuba zithunyelwe kubathengi.
Umgangatho ophezulu kunye nomphathi wentengiso onamava uya kukubonelela ngezimvo ezizodwa ngemveliso kunye neskimu sokucaphula emva kokuqonda iimfuno zakho. Emva kokubeka iodolo, umzi-mveliso wale mihla ukuvelisela iimveliso ezikumgangatho ophezulu, kwaye ngesebe lokuhlola, isebe lokuhlola ubunjani kunye nezinye iitsheki, ukuqinisekisa ukuba umgangatho wemveliso uyahlangabezana neemfuno zesizwe kunye nomthengi zezalathi.
Iqela lenkonzo emva kokuthengisa liya kukucwangcisela imithwalo yobuchwephesha kwaye lilandele yonke inkqubo yokuqinisekisa ukhuseleko kwempahla yakho; ukuba uneemfuno eziphindaphindiweyo zokuthengwa kwempahla, iqela lenkonzo emva kokuthengisa liya kukucwangcisela isitokhwe rhoqo; ukuba unemibuzo malunga nomgangatho wemveliso, iqela lenkonzo emva kokuthengisa liya kukhupha izisombululo ngokukhawuleza okukhulu.
IKaichuang aluminium ikubonelela ngenkqubo epheleleyo, inkonzo ehlanganisiweyo kunye nabangcamli. Yonke i-odolo, kuthethwano lwangaphambi kokuthengisa ukuya kunikezelo lwentengiso emva kwexesha, silanda umkhondo ngexesha elifanelekileyo ukuqinisekisa ukuba abathengi banokufumana iimpahla ngokukhuselekileyo, inkonzo yabangcamli, abasondeleyo, abathembekileyo. Kwaye sinokubonelela ngesampulu yasimahla. Kwinkqubo yokuvavanya imveliso, siququzelela uvavanyo lwemveliso ngokungqinelana nemigangatho yamazwe aphesheya. Ngokujonga ngokungqongqo komgca wemveliso zonke iinkqubo zokuzihlola ngokwazo, ukujonga kunye nokuhlolwa okugqityiweyo, ukuhlolwa kweemveliso ezigqityiweyo, Siqinisekisa ukuba zonke iimveliso zethu zinokuthenjwa. Ukudibana evekini nganye, ukufumana iingxaki, ukuzisombulula ngenkonzo engcono. Ukuba iipleyiti zethu zealuminium zinazo naziphi na iingxaki ezisemgangathweni, siya kuzama konke okusemandleni ukusombulula loo nto.
ixabiso lealuminium, Lixabiso Aluminium Sheets, aluminium ingxubevange 6061 ixabiso, Iphepha leAluminiyam elenziwa ngombala, Iphepha lePlread Aluminium Sheets, Iphepha lealuminium lama-7050,